Ramamimampionona Gérard : “Zava-dehibe mialoha ny fifidianana ny fijerena ny fiainam-bahoaka” | NewsMada
Ramamimampionona Gérard : “Zava-dehibe mialoha ny fifidianana ny fijerena ny fiainam-bahoaka”
Hanao ahoana ny fiatrehana ny fifidianana 2023? Maneho ny fijeriny ny filoha lefitry ny Conseil du fampihavanana malagasy (CFM), faritany Antananarivo, Ramamimampionona Gérard: “Zava-dehibe mialoha ny fifidianana ny fijerena ny fiainam-bahoaka.” Dinidinika…
Gazety Taratra (*): Ny fahitanao ny fiatrehana ny fifidianana 2023?
Ramamimampionona Gérard (-): Efa tafapetraka ny Ceni vaovao. Ny dikan’izany, efa misy ny fanomanana ny fifidianana. Eo koa ny anjara andraikitra maromaro amin’ny fitondrana foibe: ahoana, ohatra, ny amin’ny lalàna mifehy ny fifidianana, ny fanomanan’ny olom-pirenena an’izany amin’ny fisoratana anarana amin’ny lisitry ny mpifidy…? Ao anatin’izany ny anjara andraikitry ny lehiben’ny fokontany, ny an’ny kaominina… Raharahan’ny rehetra ny fifidianana. Efa tokony handeha izao ny fitaizana sy ny fanazarana ny olona hiatrika izay fifidianana izay.
Mieritreritra koa isika fa ny fifidianana filohan’ny Repoblika ihany izany, fa misy ny fifidianana ben’ny Tanàna, solombavambahoaka… Mila fantatra sy izaran’ny olona izany mba hahaizany mifidy, tsy hivarotany tena, hizakany sy hisitrahany tsara ny zony.
* Ahoana no hisian’ny fifampitokisana amin’ny fifidianana?
– Ny fangaraharana sy ny fahamarinana no tena mahatonga ny fifampitokisana. Zava-dehibe izay; eny, na eo amin’ny lafiny sosialy aza, ohatra, izay miaraka amin’ny fifampitsinjovana. Mamaha sy mandamina zavatra be dia be ho antsika Malagasy izay. Ao anatin’izany ny fifampiresahana, ny fiaraha-mikarakara izay atao sy samy mandray andraikitra: fangaraharana izany. Raha ao anatin’ny fifidianana, ohatra, no misy zavatra afenimpenina na tsy mazava, manjary tsy mifampatoky ny olona.
* Tsy efa fiheverana mandeha ho azy na toe-tsaina ve ny fifampiahiahiana isaky ny fifidianana?
– Izay ilay toe-tsaina… Vao tonga ny fifidianana, samy manao izay afany avokoa. Sanatria hoe hifanilikilika eto, hifamonovono, hifangalangalatra, hifampitsapatsapa hery… Satria hoe ho avy ny fifidianana dia manomboka mihorohoro. Manahirana raha amin’izao fiainana efa sarotra be izao no miaraka mihorohoro mandra-pahatonga ny fifidianana.
Zava-dehibe mialoha ny fifidianana, eo no tokony hijerena ny fiainam-bahoaka. Ny ananana fitonian-tsaina tsara mba tena afa-kifidy. Rehefa tena milamina ny toe-tsain’ny olona, afa-misoratra anarana tsara sy milamina amin’ny lisi-pifidianana izy, voahaja tsara ny zony rehetra, manana kara-pifidianana… Amin’izany no ahazoany manatanteraka ny andraikiny ao anatin’ny fahamatorana, fahamarinana, fahamalinana… Tena zava-dehibe izay.
* Ahoana ny hoe saika niteraka krizy hatrany ny voka-pifidianana?
– Taona fiomanana sy fanomanana ny olona amin’ny fiatrehana ny fifidianana izao mba ho ao anatin’ny fitoniana, fihavanana, fahamarinana, fandraisana andraikitra, fanajana zo. Entanina ny olona handray sy hampiasa an’izay zo izay. Niteraka krizy teto amin’ny firenena ny fifidianana indraindray. Noho izany, tokony harovana izay efa azo, fa tsy hoe hiteraka korontana eto indray, sanatria, ny fifidianana.
Koa efa omanina sy taizaina ny olona sy ny tomponandraikitra isan’ambaratonga ho ao anatin’ny fahamarinana, fahazavana, fangaraharana izany. Ka handraisan’ny rehetra sy hoeken’ny rehetra izany tsy hiteraka korontana.